काँग्रेस सभापतिले भने-गोविन्द सीमामा ढल्दा मैले उठाएको हुँ — OnlineDabali
काँग्रेस सभापतिले भने-गोविन्द सीमामा ढल्दा मैले उठाएको हुँ
यम प्रसाद पौडेल, सभापति, नेपाली काँग्रेस पुनर्वास नागरपालिका
Posted on March 15, 2017 by अनलाइन डबली
अहिले पुनर्वाबासको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले पनि त्रास र शोकाकुलमय नै छ । सीमामा आवतजावत बन्द छ । उनीहरु पनि आएका छैनन् र हामी पनि गएका छैनौँ ।
२६ गते घटना कसरी भएको थियो ?
बेलौरीमा मेरो पार्टी कार्यक्रम थियो । म त्यहाँ जाने तयारीमा थिए । भारतीय एसएसबी र केही भारतीय नागरिक नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर घर र कल्भर्ट भत्काउन थाले । सुरुमा म र असई रोशन चन्द गयौँ । हामीमाथि ढुंगा हानियो । मैले जनतालाई सीमामा आउन आह्वान गरे । जनताहरु सीमा सुरक्षाको लागि आए । पार्टी कार्यक्रमको लागि बेलौरीमा भएका र जाने तयारीमा कार्यकर्ता र जनता पनि सीमामा आएर भारतीयहरुको प्रतिरोध गर्न सुरु गरे ।
गोविन्दलाई गोली कसरी लाग्यो ?
हामीले भारती पक्षलाई लखेटेपछि एसएसबीले अन्धाधुन्धा पाँच फाइरिङ गर्यो । त्यही क्रममा गोविन्दलाई गोली लाग्यो । म र अरु साथीहरुले उठाएर ल्यायौँ । उपचारको लागि धनगढी लैजाने क्रममा मृत्यु भयो ।
गोविन्दलाई गोली लागेपछि तपाईँहरु सीमाबाट फर्किनु भयो ?
होइन, हामीले गोविन्दलाई ल्यायौँ । केही त्यही बसिरह्यौँ । नेपालीहरु झन आक्रोसित थिए । हाम्रो सुरक्षाकर्मी पनि थपिए । त्यसपछि भारतीय पक्ष अगाडि बढेन । बढेको भए ठूलो युद्ध हुने थियो ।
मैले गोविन्दलाई गोली लागेलगत्तै गृहमन्त्री, कञ्चनपुरका सांसद तथा मन्त्री रमेश लेखकलाई फोन गरेर घटनाबारे जानकारी दिँदै गोविन्दलाई सहिद घोषण र घाइतेको छिटो उपचारको पहल गर्न भने ।
तपाईँले त गोविन्दलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनु हुँदैन भन्नु भयो रे नि ?
होइन, यो एकदम झुट कुरा हो । मेरो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले समाचार बनाइयो । यसप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ । यसको मैले खण्डन पनि गरिसकेको छु । गोविन्दलाई गोली लाग्दा उठाउने पहिलो व्यक्ति मै हुँ र गृहमन्त्रालय फोन गरी सहिद घोषणा गरेर राष्ट्रिय सम्मानको माग गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि म नै हुँ । तर प्रचार ठिक उल्टो भयो ।
अझ गोविन्द त मेरो नातेदार पनि हुनुहुन्छ । उहाँ हाम्रो बाहिनी ज्वाँइ हो । मैले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सीमामा प्रतिरोधको लागि आह्वान गर्ने व्यक्तिले लडाइँमा सहिद हुनेको विरोध गर्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
मैले त गोविन्दलाई राज्यले दिएको सम्मानले पुगेको छैन भनिरहेको छु । यस निम्ति हामीले संघर्ष समिति नै बनाएका छौँ । समितिमार्फत हामीले परिवारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छौँ । टिकाराम चापागाईलयात घटनाका घाइतेको उपचारको लागि प्रशासनसँग माग गरिरहेका छौँ । आजैमात्र गोविन्दका परिवारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने, घाइते उपचार, गोली हान्ने एसएसबीलाई कारवाहीको माग गर्दै पुनर्वास उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कञ्चनपुरमा डेलिगेशन गएको छ ।
यो प्रचार किन भयो होला ?
सीमाको विषयमा यहाँ हामी सबै राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा छौँ । यो हाम्रो राष्ट्रियताको मुद्दा हो । केही साथीहरुले गोविन्दको लासमाथि राजनीति गर्ने प्रयास गरेका होलान् । म त के भन्छु भने, सीमामा लडेर मर्नेमाथि राजनीति नगरौँ । यो राजनीतिक विषय होइन । गोविन्दको राजनीति आस्था कुन पार्टीमा थियो भन्दा पनि नेपाली सीमा रक्षाको लागि लडेर मरे, यो कुरा ठूलो हो ।
मैले पार्टीको नगर कमिटीबाट निर्णय गरेर गोविन्दको परिवारलाई ५० लाख राहत, परिवारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने र पुनर्वासको नाम ‘गोविन्दनगर’ नाम राख्नुपर्छ भनेर केन्द्रमा पठाएको छु ।
सहिद गोविन्दका बुबाले ढोकामा बसेर रुँदै यसो भने…(भिडियोसहित)
अारअार क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन गर्न सर्वोच्चको आदेश
Posted in डबली वार्ता, मुख्य खबर, समाचार | Leaveareply
नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसक्यो, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानैपर्छः डा. दीक्षित (अन्तरवार्ता)
अन्तरवार्ताः अबको संघर्ष वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाको लागि – प्रकाश शाही
अन्तरवार्ताः शैक्षिक दलाल-माफियाहरुको सूची तयार गरेर कारवाही गर्छौंः अध्यक्ष रायमाझी
अन्तरवार्ताः विप्लवले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपले हल गर्नुपर्छः भण्डारी- केन्द्रीय सदस्य (नेकपा)
‘लिमी महोत्सव’ को तयारी पूरा, चिनियाँ प्रतिनिधीसँग वार्ता गर्छौं
देशकै जेष्ठ जनप्रतिनिधि बजेट माग्न हुम्लाबाट काठमाडौँमाः भन्छन्- गाउँमा सिंह गए, दरबार गएन हजुर
अहिलेकै राज्यव्यवस्थाबाट जनताको समृद्धि सम्भव छैन